Vaovao - Midira ao amin'ny fikosoham-bolo APP ary jereo ny fomba nahatonga ny hazo ho pulp?
Avy amin'ny fanovana majika avy amin'ny hazo ka hatramin'ny taratasy, inona ny fizotrany nandalovany ary inona no karazana tantara nananany? Tsy asa mora io. Tsy misy sosona maromaro ihany, fa misy fari-pitsipika avo lenta sy fepetra takiana hentitra koa. Amin'ity indray mitoraka ity, andao isika hiditra ao amin'ny vovonan'ny pulp APP hijerena ilay taratasy amin'ny 0 ka hatramin'ny 1.
Ho any amin'ny orinasa
Rehefa avy niditra tao amin'ny orinasa izy ireo, ny akora vita amin'ny hazo dia nopetahana halava mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fitaovana, ary avy eo nopotsehina ny palitao (hodi-kazo) izay tsy mifanaraka amin'ny kalitaon'ny pulp. Ny poti-kazo fanamiana sy avo lenta dia alefa any amin'ny faritra fandrahoana sakafo amin'ny alàlan'ny rafitra fampitana mihidy. Ny poti-kitay sisa tavela dia potipotehina ary dorana ao anaty vata kely hiteraka herinaratra. Ny rano na fitaovana hafa novokarina nandritra ny fanodinana dia haverina ho herinaratra na etona.
Pulping mandeha ho azy
Ny dingan'ny fikapohana dia misy ny fandrahoan-tsakafo, fanesorana ny loto, fanesorana lignin, fanamainana, fanasiana rano ary fananganana sns. Ny fitsapana ny haitao dia avo lenta, ary ny pitsopitsony rehetra dia hisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny taratasy
Ny pulp vita amin'ny hazo masaka dia alefa any amin'ny faritra manala oksizenina aorian'ny fanesorana ny fahalotoana ao amin'ny faritra fizahana, izay nesorina indray ny lignin ao anaty pulp hazo, mba hahafahan'ny pulp mandry tsara kokoa. ny klôro tsy misy singa, ary avy eo dia atambatra amin'ny fitaovana fanasan-damba pulp tena mahomby mba hahazoana antoka fa ny pulp output dia manana ny toetra mampiorina tsara, fotsy fotsy, fahadiovana avo ary toetra ara-batana ambony.
Mandritra ny fizotry ny fandrahoana sakafo amin'ny sombin-kazo dia mamokatra ranon-tsiranoka mavo maizina (fantatra amin'ny anarana hoe "zava-pisotro mainty") misy lignin alkaly. Ny fahasarotana amin'ny fitsaboana zava-pisotro misy alikaola mainty dia nanjary loharanon'ny fahalotoan'ny orinasa pulp sy taratasy.
Ny rafitra fanarenana alkali efa mandroso dia ampiasaina mba hampifantoka ireo fitaovana matevina amin'ny alàlan'ny etona ary avy eo hodorana ao anaty vilia. Ny setroka avo lenta vokarina vokarina dia ampiasaina amin'ny famokarana herinaratra, izay mety hahatratra ny 90% amin'ny filan'ny herinaratra amn'ny famokarana pulp, ary ny etona antonony sy ambany dia azo ampiasaina indray amin'ny famokarana.
Mandritra izany fotoana izany, ny alkaly ilaina amin'ny fizotran'ny pulping dia azo averina ampiasaina indray ao amin'ny rafitra fanarenana alkali. Tsy mampihena ny vidin'ny famokarana fotsiny izany fa manatratra ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fiarovana ny angovo ary ny fihenan'ny famoahana entona.
Ny takelaka vita amin'ny pulp dia nopetahan'ilay mpanapaka taratasy ho lasa voafaritra manokana amin'ny lanjany sy ny habeny ary avy eo entina any amin'ny tsipika fonosana tsirairay.
Ho an'ny fanamorana ny fitaterana dia misy takelaka vita amin'ny pulp vita amin'ny fehikibo, ary arakaraka ny fotsifotsy sy ny naotin'ny fandotoana izy rehetra.
Ampiasaina mandeha ho azy ny fitaovana amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ny vokatra 3.000 taonina isan'andro. Afa-tsy mandritra ny fikojakojana ny masinina, ny fotoana hafa dia miasa tsy tapaka.
Aorian'ny fametahana ny fonosana vita amin'ny horonam-bato manaraka, dia hosaronina sosona taratasy izy mba hanamorana ny fonosana sy ny fitaterana aorian'izay ary koa hialana amin'ny fahalotoan'ny tabilao mandritra ny fitaterana.
Nanomboka teo, ny milina inkjet dia mametaka ny laharana serial, daty famokarana ary kaody QR ho an'ny tabilao pulp. Azonao atao ny mamantatra ny niandohan'ny pulp mifototra amin'ny fampahalalana momba ny famafazana kaody mba hahazoana antoka fa tsy tapaka ilay "rojo".
Avy eo ny stacker dia mametaka ireo kitapo kely valo ao anaty kitapo lehibe iray, ary farany amboariny amin'ny masinina mitazona azy io, izay mety amin'ny fiasan'ny forklift sy ny fiandrasana dock aorinan'ny offline sy ny fitehirizam-bokatra.
Ity no faran'ny rohy "pulp". Aorian'ny fambolena ny ala sy fanamboarana ny pulp, ahoana ny fomba fanamboarana ny taratasy? Miandrasa azafady ny tatitra fanaraha-maso.